Home ASIAN FOOTBALL STORIES Arda Turan Storyhood Story Sheekooyinka dhabta ah ee aan la sheegin
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; 'El Turco'. Dabeecadda Caruusha ee Arda Turan oo lagu daray faahfaahin aan la shaacin oo xaqiiqo ah waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga. Haddii aanad u baahneyn, sii wad.
Arda Turan - Sheeko Xeelad -Sanadaha Hore
Arda Turan oo ku dhashay 30 Janaayo 1987 ee Istanbul, Turkiga oo u dhashay Mr Adnan Turan (Aabaha) iyo Yuksel Turan (hooyo). Waxa uu ku koray isagoo aan laheyn wax shakhsi ah oo uusan aqoonin waxa uu noqon lahaa ama waxa uu ku imaan lahaa noloshiisa.
Arda rikoodhka akadeemiyadda wuxuu ahaa mid aad uga fog tusaale ahaan. Dhallinyaradii hore ayuu iskuulku kufsadey, waxaana badanaaba laga heley dhamaadkii booqashadii macalimiinta dugsiga. Waxay ahayd arrimahan anshaxeed ee keenay isaga oo go'aansaday inuu tago dugsiga ma aha baaqiisa. Waqtigaan, kubada cagta ayaa noqotay waxa kaliya ee uu ka fekerayo.
Go'aanka Arda ee ku aaddan kubadda cagta waxaa aqbalay waalidkiis. Waxay si degdeg ah uga jawaab celiyeen go'aankiisa isaga oo si deg deg ah ugu diiwaangeliyay akadeemiga kubadda cagta maxaliga ah ee Istanbul.
Waalidiintiisa ayaa ogaa in fahamkooda ilmahoodu yahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay inay bartaan waalid wanaagsan.
Waxay ahaayeen kuwo waxtar leh oo wax ku ool ah si loo hagaajiyo una kobciyo Arda markii uu koray. Arda waqti wakhti ayuu soo saaray qaab ciyaareed shakhsiyeed oo khaas ah taasoo muujineysa kubada cagta isla markaana wuxuu ku sii jirey noloshiisa ilaa taariikhda.
Sida awooda uu u kobcay, waalidkiis wuxuu noqday mid taageero badan. Habka ugu wanaagsan ee aad isaga ku faraxsanaan lahayd wuxuu ahaa inuu soo qaato dukaanka. Waxay iibsan lahaayeen wax kasta oo uu doonayo. Waxay isaga ilaalinayaan wax kasta oo raba inuu riyadiisa ku yareeyo. Fikrad ahaan, waxay daawadaan isaga seexdaan, cunaan oo ciyaaraan ciyaarta cajiibka ah.
Arda Turan - Sheeko Xeelad -Nolosha Qoyska
Aabbe: Mr Adnan Turan waa nin nabad ah oo aad ugu raaxeysanaya ganacsigiisa maxalliga ah ee degmada BaRampaşa ee Istanbul.
Waxaa had iyo jeer la xusuustaa doorka taageerada ee uu siiyey wiilkiisa jihada xirfadiisa. Si ka duwan sida xaaskiisa Yuksel, isaga oo aan wax fara badan ku qaban hawlaha wiilkiisa.
Hooyo: Yuksel waa hooyada Arda. Waa arrin aad uwanaagsan oo loo yaqaano sida ugu fiican ee looga ilaaliyo wiilkeeda murugada.
Waxay ahayd mid deg deg ah in la ilaaliyo wiilkeeda inta lagu guda jiro dhacdada diyaaradeed ee qaran oo wiilkeeda Arda uu weeraray saxafiga Turkiga Bilal Meshe.
Sida laga soo xigtay Yüksel Turansaid, "Ololaha lenching ee wiilkayga ayaa bilaabay '.
Arda Turan hooyadiis, Yüksel Turan, ayaa yidhi, "Arda waa qof aad u wanaagsan, caadi ahaanna qof aan dooneynin inuu jebiyo qof walba, wuxuu ku guuleystay guushii aan kubada cagta ka heli karin waddankan, iyadu waxay bixineysaa qiimaha hadda ... Waxay isku dayayaan in ay wiilkayga ku dhammeeyaan ololaha wadajirka ah ! Waxaan u qoray si aan caqligal ahayn ku saabsan wiilkayga in ay adagtahay in aan iyaga ladilin. " Waxaa loo maleynayaa in la siiyo meel lagu sheego.
Walaal: Okan Turan Arda walaalkiis.
Okan wuxuu shahaadada jaamacada Istanbul (BSc) ka qaatay Jaamacadda Istuudiyaha ee Istanbul, Aeronautical Engineering and Astronautical Faculty ee 1989 iyo Master of Master (MSc) oo ka yimid Jaamacadda Istuudiyaha ee Istanbul, Jaamacadda Farsamada, Maaraynta Maareynta ee 1992. Okan wuxuu bilaabay xirfaddiisa xirfadeed ee suuqa suuqyada ganacsiga sida Falanqaynta Maaliyadeed ee Data Securities Co. oo ku taal 1992 wuxuuna u adeegay Sare Financial Analysts ilaa taariikhda.
Arda Turan - Sheeko Xeelad -Nolosha Xiriirka
Miranda Shelia iyo Arda Turan ayaa la kulmay tan iyo Dec 2016. Qaabka Georgianka ah wuxuu ahaa saaxiibkii dhowaanahan ahaa sida wakhtiga qorista.
Aslian Dogan (muuqaalka hoose) ayaa ahaa saaxiibadii hore ee Arda Turan. Waxay ku dhalatay 4th December, 1985 waxayna ku hadlaysaa labada Ingiriis iyo Turkiga. Aslian iyo Arda waxay bilaabeen 2014 waxayna dhamaadeen December 2016. Labada dhinacba waxay ahaayeen kuwo aad u dhow midba midka kale.
Asiil Aslian, Arda Turan wuxuu lahaa 5 xiriiro kale oo sanooyin ah. Arda Turan xiriirka nolosha ee kooban waxaa ka mid ah magacyada 6. (1) Dilara Oztunç (2007 - 2008), (2) Sinem Kobal (2012 - 2013) (3) Selin Imer (taariikhda 2012) (4) Idil Firat (taariikhda 2013) (5) Aslihan Dogan (Taariikhda 2014) (6) Miranda Shelia (2017).
Arda Turan - Sheeko Xeelad -Wuxuu u maleynayaa inuu yahay Pop Star
Intii lagu jiray fasaxa jiilaalka ee La Liga, Turan wuxuu go'aansaday inuu isku dayo oo uu u noqdo xiddig pop. Wuxuu u soo noqday Turkey si uu ugu heeso 'Voice'. Waxa uu heesay hees la yiraahdo 'Sari Cismeli Mehmet Aga' - waa sheeko qurux badan oo turkiga ah, iyo sidoo kale, aan u sheegno inuu kubad ku dhejinayo. Garsoorayaashu weli waxay u rogeen kuraasadooda si ay u arkaan cidda marti ahaanta u aheyd.
Arda Turan Hooyo sheeko xeeldheer Xogta loo yaqaan 'Idolization Michael Jordan iyo Roger Federer
Ciyaartoyda qadka dhexe ee qaangaarka ah ayaa loo arkaa inay calaamad u yihiin qaar badanaa gaar ahaan Turkiga. Laakiin Arda Turan waxay leedahay calaamado ku saabsan ciyaaraha kale. Halyeeyga Tennis Roger Federer iyo icon Jordan Basketball Michael Jordan waa ciyaartoy uu u fiirsado.
Wareysi, ayuu ku sheegay, "Waxaan mar walba ku dadaalaa inaan horumar sameeyo, ciyaartoyda ugu fiican iyo haweeneyda waxay mar walba ku dadaalaan sidii ay u fiicnaan lahaayeen. Taasina waa sababta keentay in Michael Jordan iyo Federer ay yihiin calaamado. "
Labada legends kuwaas oo loo yaqaan kaliya ma aha xirfadahooda iyo kartidooda ku saabsan garoonka laakiin sidoo kale nimcadiisa iyo dabeecada aadanaha. Kooxaha Turan waxay inta badan ku tilmaameen inuu yahay qof niyadjab leh oo wanaagsan oo dareen ah oo ku saabsan waxyaabaha uu aaminsan yahay.
Arda Turan Hooyo sheeko xeeldheer Xogta loo yaqaan 'Jacaylka Gawaarida
Sida laga soo xigtay wargayska Turkiga, Turan wuxuu horay u lahaa Aston Martin DB9 iyo Mercedes-Benz SLS AMG.
Waxa uu leeyahay dareenka baabuurta waxaana uu haatan wadaa a Audi RS6. Bishii Janaayo 2009, wuxuu ku lug lahaa shil gaari Istanbul. Nasiib wanaag, Turan kuma dhicin dhaawacyo halis ah, tababbarna wuu socdaa oo la gooyaa oo keliya.
Arda Turan Hooyo sheeko xeeldheer Xogta loo yaqaan 'Arrimaha dhaawacyada
16 Nofeembar 2008, Turan ayaa ku dhuftay ciyaartii Istanbul BB.
Kadib markii lagu seexiyay isbitaalka, waxaa lagu ogaadey qalitaan wadnaha ah. Maalin ka dib dhacdada, dhakhtarradu waxay caddeeyeen in Turan uu caafimaad wanaagsan yahay, oo daal aad u daran uu sababay arrin. Bishii Nofeembar 2009, wuxuu ku dhacay xanuun yar oo hargab doofaareedka ah, laakiin waxaa laga bogsaday dhowr maalmood si dib loogu bilaabo tababarka.
Xitaa dhowaan, Turkiga waxaa lagu yaqaanay dhaawac. Maalmahan, jilibkiisa ama murqaha. Xaqiiqdii, isagoo naftiisa dhaawacmay ayaa ka soo horjeeda shaqadiisa hadda, ayuu garoonka ka baxay isagoo indhaha ku haya.
Inkastoo dhaawacyo jireed, waxaa loo yaqaanaa inuu yahay dagaal. Badanaa waa la tixgeliyaa marka ugu horeysa ee ciyaartoyda leh waligeed ma dhihin dabeecad dhimasho. Xaqiiqdii ma fududa in la yimaado, lakiin waa ciyaaryahan muhiim u ah kubada cagta.
Arda Turan Hooyo sheeko xeeldheer Xogta loo yaqaan 'Iskudhicil la'aanta leh Leonidas
Jilaaga caanka ah ee udhaqeeya actorka caanka ah, Gerard Butler Aka Leonidas of 300 iyo Arda Turan ayaa mar horeba internetka ku dhigay duufaan. Maxay qof walba u heleen tayadoodu waxay ahayd helitaanka sawirkii Arda ee burburkii beerta kaas oo si fiican ula dhaqmay Leonidas.
Arda Turan - Sheeko Xeelad -Wuxuu ku riyooday inuu u ciyaaro Liverpool
Ciyaartoyda waxaa badanaa loo yaqaanaa inay ku dhawaaqaan jacaylkooda koox gaar ah. Qaarkood waxay leeyihiin nasiib wacan oo u ciyaaraya kooxahooda ay jecel yihiin halka qaar aanad samayn.
Arda Turan ayaa leh qaybta danbe. Ka dib Euro 2008, Andrey Arshavin wuxuu ku dhawaaqay jacaylkiisa FC Barcelona. Nasiib darro, guurku marnaba ma dhicin. 2011, Turan, ka dibna u ciyaaraya Galatasaray ayaa sidoo kale ka hadlay sida uu u jecel yahay Liverpool English. Waxa uu yiri: "Sida had iyo jeer aan xuso, Liverpool ayaa igu soo jiidatay sababtoo ah dhaqankooda.
"Yurub, waxaan ahay taageere Liverpool, sidaasi darteed hadii aan u ciyaaro Yurub waxaan jeclaan lahaa inaan u ciyaaro iyaga."
Wuxuu sheegay inuu yahay riyadiisa ah inuu u ciyaaro Reds of Merseyside. Si kastaba ha ahaatee, Liverpool marna uma soo wacin. Atletico Madrid ayaa ku guuldareysatay inay ka faa'iideysato Diego Simeone oo ku guuleystay koobkii La Liga ee Champions League, waxaana uu haatan u dhaqaaqay Camp Nou. Waxa ay u muuqatay inay aheyd guul darradii Liverpool inay aheyd faa'idadii Barcelona.
Arda Turan - Sheeko Xeelad -Markaad xirxirto garsooraha
Inkastoo uu tusaale fiican u yahay qaab ciyaareedkiisa wacan ee garoonka dhexdiisa, Turan ayaa si aad ah u lumiyay xamaasadiisii ​​xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, isagoo ku tuuray kabtanka kooxda Atletico ee Copa del Rey xilli ciyaareedkii hore.
Hase yeeshee, ma noqon lahaa ciyaaryahankii ugu danbeeyay ee madaxiisa waayay.
Arda Turan - Sheeko Xeelad -Nin leh wadnaha Golden
Arda waxaa loo yaqaanaa inuu leeyahay qalbi dahabi ah. Waxa uu dhawaan ka qaybqaatay cayaaraha samafalka ee Masar si uu lacag ugu ururiyo agagaaraha Carabta. Sanadkii la soo dhaafay, wuxuu ciyaaray samafal samafal ah oo ka socda gurigiisa hore (Izmir Ataturk Stadium) si loogu soo ururiyo qoysaska muwaadiniinta miinada miino.
Waxaa si gaar ah loogu yaqaanaa in lagu caawiyo caruurta jiran. Bishii Maajo, 2014, waxaa loo magacaabay Safiirkii Amniga ee Khooga Xaaladda oo la xidhiidha Dilka Qarax 161 kuyaala dad rayid ah. Hawlaha uu ka mid yahay horumarinta wacyiga iyo kor u qaadista nabadda adduunka.
Sidoo kale waa nin qoys. Mushaharkiisa ugu horreeya, wuxuu iibsaday gurigiisa waalidkiis, wuxuuna dhawaan soo iibsaday gaariga walaalkiis, ma aha oo kaliya baabuur, Porsche.
Arda Turan - Sheeko Xeelad -Socialist
Arda Turan mar ayuu gurigiisi ugu furay Madrid si dadweynaha guud ahaanba loo soo bandhigo siyaasadda. Goobta waxaa loo isticmaalaa ujeedada doodaha iyo wadahadalka. Turan naftiisu waa ladagaalanka, waxaana la ogyahay in qof walba oo qoyska ka mid ah uu ula dhaqmo si isku mid ah iyada oo aan loo eegin hanti iyo xirfad.
Wuxuu ku soo koray aag shaqeed oo ku yaala Istanbul waxaana uu sannado hore ku jiray wadooyinka. Xilliyada adag ee caruurnimadiisa iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan fasalka shaqada ayaa raad ku yeeshay noloshiisa. Wareysi uu ku sheegay, "Waxaan mar walba taageeray xuquuqda shaqaalaha, xuquuqda dadka caadiga ah."
Mawqif siyaasadeed oo dhammaystiran ayaa Turan u dhaxlay jiilasha. Aabihiis ayaa ka tagay fikrado caajis ah, awoowe wuxuu ahaa taageere siyaasadeed garabka midig.
Arda Turan - Sheeko Xeelad -Xirfadda Kubadda Cagta
Turan wuxuu bilaabay kubbadda cagta ee Bayrampaşa. Markii uu ahaa 12 oo keliya, wuxuu Galatasaray ku biiray 2000 halkaasoo uu istaagay. Waxa uu kulankiisii ​​ugu horeeyay u ciyaaray Galatasaray ee 2006 ka dib shan xilli ciyaareed oo uu ciyaaray ciyaartoyda da'da yar. Had iyo jeer ma ahan duufaan. Ciyaaryahankan da'da yar ayaa ku dhibtooday inuu la qabsado kubada cagta maalin walba, ma ahan xawaaraha iyo xoogga looga baahan yahay kulanka. Arda wuxuu ahaa ciyaaryahankii ugu gaabnaa ee da'diisu tahay sanadka dhalashada ee 1987, waxaana uu muujiyay qaab ciyaareedkiisa hore. Weyn, ciyaartoy khibrad badan oo ka ciyaara horyaalka ayaa ka soo horjeeda ciyaaryahan oo lahaa xirfadihii oo dhan, lakiin kubada cagta waxba kama qaban.
Wuxuu kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay xulka qaranka Turkiga bishii August 2006. Turan wuxuu u ciyaaray Turkey markii ugu horeysay kulankii Luxembourg isagoo ciyaaray kulan saaxiibtinimo oo ku guuleystay 1-0.
Xilligii 2006 / 07, Turan wuxuu noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan Galatasaray. Wuxuu ku guuleystay horyaalkiisii ​​ugu horeeyay ee Super League ee 2008. Atletico Madrid ayaa udhaqaaqday 12 million euros bishii August 2011. Xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ee Atletico Madrid, Turan wuxuu ku guuleystay Europa League iyo UEFA Super Cup. Xiddiga Atletico Madrid 10 ayaa door muhiim ah ka ciyaaray kooxdiisa guushii horyaalka ee horyaalka xilli ciyaareedkii 2013 / 14. Isla xilli ciyaareedkan, Atletico Madrid ayaa u soo baxday finalka Champions League markii ugu horeysay ee sanadkan 40. Xiddiga Turkiga ayaa dhaliyay 22, waxaana 32 uu caawiyay 177 kulankiisii ​​afaraad ee uu ku ciyaaro Atletico Madrid. Iyadoo lagu soo iibsaday 34 million euros, saxiixa cusub ee Barcelona ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu qiimaha badanaa Turkiga taariikhda.
Arda Turan - Sheeko Xeelad -Joojinta Saxafiga
Arda Turan oo ka fadhiistay ciyaaraha kubadda cagta Turkiga ayaa yimid kadib markii lagu soo wariyay in ay saxafiyiinta ku cagajugleeynayeen duulimaad.
Waxaa lagu eedeeyay in uu lahaa aflagaado iyo aflagaaddo la xiriira suxufi ku saabsan duulimaad ka dib markii uu saaxiibtinimo ka soo horjeeday Makedoniya ka dib markii la sheegay in la sameeyey taasoo ku eedeysay Turan inay abuurtay khilaaf u dhexeeya kooxdii lacag bixisay.
Sida laga soo xigtay Reuters, Turan ayaa qirtay inuu "qalad sameeyay" wuxuuna ka tagay kooxdiisii ​​qaranka.
"Qalad ayaan sameeyay intii aan xirnaa dharka xulka qaranka. Waxa ay ahayd wax aan aheyn in ay ka dhaceen diyaaradda xulka qaranka, " Ayuu yiri.
Sida laga soo xigtay wargeyska Ingiriiska The Independent, Dhacdadu waxay ku dhacday diyaaradda kooxda ilaa Talyaaniga markii Turan la sheegay inuu u dhawaaday Bilal Meşe oo ka mid ah warbaahinta Turkiga Milliyet. Halkan waxa ah waxa Madaxa-bannaani soo wariyay inuu ahaa is-weydaarsiga:
"Ii sheeg Bilaal Meshe, miyaad joogtaa?" Ayuu bilaabay. "Adigu ma nala joogtay markii aad ku qortay mawduucyada gunnada? Kumaa lacagta ka codsaday? Yaa iga dalbaday gunno? Kala hadal. Kaalay. Yaa kuu qoray qoraalladaas? "Turan ayaa lagu soo waramayaa Mesha, oo ah wariye saxafiyiin ah kaas oo ku eedeeyay kabtanka Turan in badan oo ka mid ah saxafiyiinta.
Turan ayaa la sheegay in uu sii waday ka hor inta uusan wargeysku xusin in loo baahan yahay in uu xiro saaxiibadiisa markii uu Mesha ku qabsaday cunaha. Arda Turan ayaa sheegay inuusan dareemeyn wax qasaare ah iyo inuusan u ciyaari doonin Turkiga. Waa lagama maarmaan in la sheego in labaduba ay ahaayeen hal saaxiib oo wanaagsan sida lagu arkay sawirka hoose.
Arda Turan - Sheeko Xeelad -LifeBogger Qeybta Wareegista
Waxaa inta badan loo yaqaanaa xakameynta kubada, kubada cagta, iyo aragtida. Waxaan soo bandhignaa heerarka kala duwan ee taariikhdiisa.
Taariikhda la beddelay: Abriil 9, 2020